Su'aalaha La Weydiiyo - Zaili Engineering Makiinado Co., Ltd.
TOR Jabiyaha Taxanaha
S Nooca Jabiyaha
V Nooca Jabiyaha
H Nooca Jabiyaha
KB Jabiyaha Taxanaha
· Nooca Jabiyaha
· V Nooca Jabiyaha
Jarjarka & Nadiifiyaha
Ma waxaad tahay soo saare ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay soo saare dhab ah, zaili makiinado dhisme co., Ltd. waxaa la aasaasay 2012.
Miyaad ku soo saari kartaa jajabyada si waafaqsan macaamiisha naqshadeynta?
Haa, adeegga OEM / ODM waa la heli karaa. Waxaan nahay soo saaraha xirfadle muddo 15 sano ah Shiinaha.
Waa maxay shuruudaha MOQ iyo lacag bixinta?
MOQ waa 1 dhigay. Lacag bixinta iyada oo loo marayo T / T, L / C, Western Union waa la aqbalay, shuruudaha kale waa laga wada hadli karaa.
Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada?
7-10 maalmood oo shaqo ah oo ka dhan ah tirada amarka
Ku saabsan Adeegga Iibinta Kadib
14 bilood oo damaanad qaad ah oo ku saabsan jabsadayaasha hidda-shidaalka ka hor imanaya biilka taariikhda rarka. 24 saac adeegga degdegga ka dib iibka si loo daboolo baahidaada.
Sideed u tijaabisaa jabiyaha kahor dhalmada?
Qalab kasta oo bareeraha korontada ku shaqeeya wuxuu sameyn doonaa baaritaanka saameynta kahor iibka.
Wadamadee ayaad u siisaa qalabkaaga korontada ku shaqeeya?
Jabiyeyaashayaga hareeraha ayaa loo iibiyaa in ka badan 30 dal oo adduunka ah oo ay ku jiraan America, Europe Australia, koonfur-bari Aasiya iyo Afrika.
Ma dalban karaa markii ugu horreysay sumadeyda gaarka ah?
Haa, waxaan ku siineynaa adeegga OEM.Waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama magacaaga astaanta, waanu soo saari doonnaa.
Waxaa jira dhowr dubbayaal qiime jaban oo suuqa ku bixiya dammaanad dhaadheer. Maxay tani tahay oo ma ii siin kartaa dubbe noocan oo kale ah?
Haa, waxaan bixinaa dubbayaal noocaas ah sidoo kale. Dammaanadaha dhaadheer badanaa waa gimmick iib ah oo indhaha soo jiita. Dammaanadda la dheereeyay badanaa waxay daboolaysaa kaliya qaybaha aan guud ahaan fashilmin sanado badan si kastaba ha noqotee. Raajiyaha, ee aan tayo wanaagsan lahayn ayaa u muuqda inay bixiyaan damaanad-gacmeedyadan. Iyo sidoo kale dammaanad qiimo jaban, qaar badan oo ka mid ah noocyada jaban ayaa buunbuuniya awoodda fasalka ft lbs ee hamaarkooda. Sida caadiga ah waxyaabo badan, haddii qiimuhu jaban yahay tayaduna waa sidaas!
Dhamaantood waa jahawareer. Dubbe noocee ah ayaan u baahanahay? Fasal noocee ah ayaan ubaahanahay Dhamaantiis waa jahwareer. Dubbe noocee ah ayaan u baahanahay? Fasal noocee ah ayaan ubaahanahay?
Noo sheeg dhammaan waxa ku saabsan side, codsi shaqo caadi ah, saacadaha la filayo isticmaalka sanadkiiba iyo miisaaniyaddaada oo waxaan kugula talin doonaa oo soo koobaynaa noocyada kala duwan iyo xulashooyinka aad kala dooran karto
Markaad ii sheegtid dubbe maxaa tan badanaa ku jira?
waxaan inta badan ku soo qaadan doonnaa qiime xirmo ah oo ay ka mid yihiin: dubbe Haydarooliga, laba qalab oo cusub, laba tuubbo, dhejisyo dhejis ah, xirmo iyo xirmo baadiyaha ah, dhalada nitrogen, xirmooyinka xirmooyinka, xirmada lacag bixinta Waxaan si cad u cadeyn doonaa wax walba goobta iibka. Ma jiraan waxyaabo dheeri ah oo qarsoon.
Waxaan ka soo iibsaday dubbe ganacsade iibiya dhamaan noocyada kala duwan ee qalabka dhaqaaqa dhulka hadana ma helayo wax caawimaad ah ama taageero ah. Maxaa samayn karaa?
Tani waa dhibaato guud. Haddii aadan helin taageerada aad u baahan tahay maxaa yeelay ganacsadahaaga ganacsigiisa ugu weyni ma aha dubbayaal ama laga yaabee inuusan garanayn jawaabaha su'aalahaaga, fadlan si xor ah noo soo wac. Dammaanad kama qaadi karno inaan ku caawin karno, laakiin haddaan kari karno, waan ku caawin doonnaa si kasta oo suuragal ah. Waxba nagama gelin meesha aad ka iibsatay dubbaarkaaga. Haddii aad ku dhegan tahay oo aad u baahan tahay caawimaad, na soo wac. Uma baahnid inaad wax naga iibsato si aad gargaar nooga hesho. Haddii aan caawin karno waan caawin doonnaa.
Waxaan haystaa dubbe aan iibsaday oo meelo kale lagu isticmaalay. Ma hubo nooca ay tahay? Dhibaatooyin ayaan ku qabaa, maxaan sameyn karaa? Sideen ku heli karaa qaybo? Ma i caawin kartaa?
Haa, na soo wac oo na sii macluumaadka ugu badan ee aad kari karto. Ma balan qaadi karno natiijo wax ku ool ah marwalba laakiin waxaan sameyn doonaa sida ugu fiican ee aan kuugu aqoonsan doono dubbahaaga. Fadlan noo soo dir sawirrada dubbaarkaaga, oo ay la socdaan lambarro ku xardhan korkiisa. Tani waxay naga caawin doontaa sidii loo aqoonsan lahaa dubbahaaga si sax ah.
Telefoonka: +86 535 6433353
Fakis: +86 535 6433353
Moobayl: +86 18601660817
Cinwaanka: No.183 Fenghuangshan Road, Degmada Fushan, Yantai, Shandong, Shiinaha
Qulqulka Qashinka, Burburin Waayo, Excavator, Shear For Excavator, Hb Jebiyaha Taxanaha, Nooca Aamusnaanta ee Jabiyaha, Xakamee Walxaha Wixii Jabiyaha,